ILouis Archives - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Ukuhlaliswa kweBayer kwezimangalo zomdlavuza weRoundup kusesemoyeni
Posted on January 28, 2020 by UCarey Gillam
Amajaji aqokelwe ukulalela icala laseSt. Louis lokufaka izisulu zomdlavuza kuMonsanto atshelwe ukuthi icala elihlehliswe unomphela ngesonto eledlule lingaqhubeka ngoMsombuluko ozayo, kusho okhulumela inkantolo, okuyizinkomba zokuthi imizamo yomnikazi weMonsanto uBayer AG yokuqeda izwe lonke Amacala okuphepha ngokuphepha kwe-Roundup herbicides asaqhubeka.
Kwesinye isibonakaliso sokuthi isivumelwano asikatholakali, ukukhethwa kwamajaji ecaleni elihlukile lomdlavuza weRoundup - leli laseCalifornia - bekuqhubeka kuleli sonto. Izilingo eSt. Louis naseCalifornia zibandakanya abamangali abathi bona noma abathandekayo babo bathuthukisa i-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuchayeka emithini yokubulala ukhula eyenziwe nge-glyphosate eyenziwe yiMonsanto, kufaka phakathi nomkhiqizo odumile weRoundup. Amashumi ezinkulungwane zabamangali benza izimangalo ezifanayo ezinkantolo ezifakwe e-United States.
UBayer uthenge iMonsanto ngoJuni ka-2018 ngesikhathi kuqala ukuqulwa kwecala lokuhlukunyezwa kwabantu abaningi. Intengo yamasheya kaBayer yashaywa ngesando ngemuva kokuthi ijaji elilodwa livume ukuthi ukubulala ukhula kukaMonsanto kwakuyimbangela yomdlavuza wommangali kuleso simo nokuthi uMonsanto wayenobufakazi obufihlekile bomdlavuza obubhekiswe emphakathini.
Izilingo ezimbili ezengeziwe ziphumela ekutholakaleni okufanayo kwamajaji futhi zaheha abezindaba emhlabeni wonke ekulahlekiseni imibhalo yangaphakathi yeMonsanto ekhombisa ukuthi inkampani yenze imikhuba eminingi yokukhohlisa emashumini amaningi eminyaka ukuvikela nokuvikela inzuzo yemithi yokubulala ukhula yayo.
Abatshalizimali beBayer banesifiso sokuthi inkampani iqede ukuthethwa kwamacala futhi isuse izivivinyo eziningi nokwaziswa okulethwa yilowo nalowo. Amasheya akhuphuke ngesonto eledlule ngesikhathi icala laseSt. Louis lihlehliswa kungazelelwe njengabameli babamangali abebegcwele abameli beBayer futhi bakhombisa ukuthi sekuseduze ukuthi kulungiswe leli cala.
Izinombolo zama- $ 8 billion- $ 10 billion ziye zantanta amasonto ngemithombo yamacala enkantolo njengengqikithi yokuxazulula inani lamacala abambe iBayer selokhu ithenge iMonsanto ngama- $ 63 billion.
IBayer isivele ixoxisane ngemibandela yokukhokha namafemu amaningi ahola icala, kepha yehluleka ukufinyelela esivumelwaneni namafemu wabamangali i-Weitz & Luxenberg kanye neMiller Firm. Ngokubambisana la mafemu amabili amele abamangali abacishe babe ngu-20,000 XNUMX, okwenza ukuthi ukubamba kwabo iqhaza kusivumelwano kube yinto esemqoka esivumelwaneni esizothokozisa abatshalizimali, kusho imithombo esondelene necala.
Imithombo ithe lezi zinhlangothi zombili "bezisondelene kakhulu" nesivumelwano.
Ngezindaba ezihlukile, kodwa ezihlobene, i-Kellogg Company kusho leli sonto ukuthi ibisuka ekusebenziseni okusanhlamvu okufafazwe nge-glyphosate ngaphambi nje kokuvuna njengezithako kokudla kwabathengi bayo nokusanhlamvu. Umkhuba wokusebenzisa i-glyphosate njenge-desiccant wathengiswa yiMonsanto iminyaka njengomkhuba ongasiza abalimi ukuba bome izitshalo zabo ngaphambi kokuvuna, kepha ukuhlolwa komkhiqizo wokudla kukhombisile ukuthi lo mkhuba uvame ukushiya izinsalela zombulali wokhula ekudleni okuphelile njenge-oatmeal.
AbakwaKellogg bathe "sisebenzisana nabahlinzeki bethu ukuqeda ukusebenzisa i-glyphosate njenge-agent yokomisa ngaphambi kokuvuna emakethe yethu yokuphakela ukolweni ne-oat ezimakethe zethu ezinkulu, kubandakanya nase-US, ngasekupheleni kuka-2025."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, Bayer AG, EPA, Ukudla, glyphosate, Monsanto, RoundUp, isayensi, St. Louis, Isivivinyo
Icala laseSt. Louis Roundup lihlehlisiwe njengoba kuvela indawo enkulu yokuhlala eduze
Posted on January 24, 2020 by UCarey Gillam
Ukuvuselelwa - Isitatimende esivela eBayer: “Amaqembu afinyelele esivumelwaneni sokuqhubeka necala likaWade eMissouri Circuit Court likaSt. Ukuqhubeka kuhlose ukuhlinzekela amaqembu ukuthi aqhubeke nenqubo yokulamula ngokuthembeka ngaphansi kwesandla sikaKen Feinberg, futhi agweme iziphazamiso ezingavela ezivivinyweni. Ngenkathi iBayer ibandakanyeka ngendlela eyakhayo kwinqubo yokulamula, asikho isivumelwano esibanzi ngalesi sikhathi. Akunasiqiniseko noma uhlelo lwezikhathi lwesinqumo esiphelele. ”
Ukuvulwa obekulindelwe kakhulu kwalokho obekungaba yisilingo sesine somdlavuza weRoundup kuhlehliselwe unomphela ngoLwesihlanu phakathi kwezingxoxo zokuxazulula izinkinga phakathi komnikazi weMonsanto uBayer AG kanye nabameli abamele izinkulungwane zabantu abathi banomdlavuza kubangelwe ukuvezwa kwemithi yokubulala ukhula egazini iMonsanto's glyphosate-based.
Ijaji leNkantolo yesiFunda yaseSt. Louis City, u-Elizabeth Hogan likhiphe umyalo othi "kuqhubeka imbangela" kuphela. Lesi sinqumo sivele ngemuva kokuthi abameli abahola phambili abavela ezinkampanini zabamangali baseWeitz & Luxenberg ezinze eNew York naseMiller Firm yaseVirginia beshiye inkantolo kaHogan kungalindelekile ngaphambi nje kokuba kuvulwe izitatimende obekumele ziqale phakathi noLwesihlanu ekuseni. Imithombo esondelene namaqembu ezomthetho ekuqaleni ithe izitatimende zokuvula zihlehliselwe emuva kwaze kwaba ntambama ukuze kuvunyelwe isikhathi sokubona ukuthi abameli babamangali nabameli beBayer bangaphothula yini isinqumo esizolungisa amashumi ezinkulungwane zamacala. Kepha kuthe ntambama sekumisiwe ukuqhubeka kwalezi zinqubo futhi bekucatshangwa kabanzi ukuthi isivumelwano sesifeziwe.
Izinombolo zama- $ 8 billion- $ 10 billion ziye zantanta amasonto ngemithombo yamacala enkantolo njengengqikithi yokukhokhelwa kwamacala amaningi abambe iBayer selokhu ithenge iMonsanto ngoJuni ka-2018 ngama- $ 63 billion. Amanani amasheya enkampani acindezeleke kakhulu ngokulahleka kwecala okuphindaphindiwe kanye nemiklomelo emikhulu yamajaji ngokumelene nenkampani ezivivinyweni ezintathu ezigcinwe kuze kube manje.
Ezinye izivivinyo eziningi bezizobanjwa emasontweni nasezinyangeni ezimbalwa ezizayo, kucindezelwe iBayer ukuthi ixazulule amacala ngesikhathi ukuze kutholakale abatshalizimali emhlanganweni wayo wamasheya waminyaka yonke ngo-Ephreli.
Izikhulu zeBayer zikuqinisekisile ukuthi bangaphezu kwabangummangali abangaphezu kuka-42,000 abafake amacala eMonsanto. Kepha imithombo yamacala ithi manje sebengaphezu kuka-100,000 XNUMX abamangali abafakwe izimangalo, yize isibalo samanje sezimangalo ezifakiwe singacaci.
Inkampani i-Weitz nenkampani iMiller zihlangene zimele izimangalo zabamangali ababalelwa ku-20,000 XNUMX, ngokusho kwemithombo esondelene namafemu. UMike Miller, ohola le nkampani iMiller, ungummeli ohola phambili ecaleni laseSt. Louis ebelizovulwa ngoLwesihlanu.
UMiller ubelokhu ebambe ongezansi ezinkulumweni zokuxazulula le nkinga neBayer njengoba abanye abameli abaningi abamangaleli sebesayine isivumelwano nenkampani yezemithi yaseJalimane. IBayer idinga ukuthi ikwazi ukufeza isinqumo ngezimangalo eziningi ezingakakhokhwa ukuze kutholakale abatshalizimali abanganelisekanga.
Umlamuli uKen Feinberg uthe ngesonto eledlule akucaci ukuthi kungaba khona yini ukuxazululwa komhlaba wonke ngaphandle kukaMiller. UMiller ubefuna "lokho acabanga ukuthi kuyisinxephezelo esifanele," kusho uFeinberg. IJaji Lesifunda saseMelika uVince Chhabria waqoka uFeinberg ukuba abe ngumlamuleli phakathi kweBayer nabameli babamangali ngoMeyi odlule.
Ijaji lecala laseSt. Louis lase likhethiwe vele kanti abamangali abane kanye namalungu omndeni wabo babekhona ngoLwesihlanu ekuseni, bezungeze inkantolo yangaphambili.
Abameli bakaMonsanto benze isicelo ekuqaleni kukaLwesihlanu sokuthi kuvinjelwe ukusakazwa kwecala yiziteshi zethelevishini nezomsakazo wendawo kodwa iJaji uHogan lakhipha isinqumo sokuthi le nkampani mayingavumi. Ukuqulwa kwecala langoLwesihlanu bekungaba okokuqala ukwenzeka endaweni yaseSt. Louis, lapho iMonsanto yayinendlunkulu iminyaka engaphezu kwengu-100.
Izilingo ezintathu zokuqala zamhambela kabi uMonsanto nomnikazi wayo waseJalimane uBayer AG njengamajaji athukuthele unikezwe ngaphezulu kwe- $ 2.3 billion ekulimaleni kwabamangali abane. Amajaji wecala ehlise imiklomelo yamajaji yabalelwa ezigidini ezingama-190 zamadola, futhi bonke baphansi kwesikhalazo.
Izilingo zivule amehlo omphakathi irekhodi langaphakathi leMonsanto lokho kukhombise ukuthi iMonsanto yenze kanjani amaphepha esayensi amemezela ukuphepha kwemithi yokubulala ukhula yayo ebonakala ngokungeyikho ukuthi yadalwa kuphela ososayensi abazimele; wasebenzisa abantu besithathu ukuzama ukudicilela phansi ososayensi ababika ukulimala nge-glyphosate herbicides; futhi ibambisene nezikhulu ze-Environmental Protection Agency ukuvikela isikhundla sikaMonsanto sokuthi imikhiqizo yayo ayibanga umdlavuza.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker umdlavuza, EPA, Ukudla, glyphosate, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, St. Louis, Isivivinyo
Uthuli phezu kwabezindaba ngaphambi kokuvulwa kwesilingo somdlavuza weRoundup
Posted on January 23, 2020 by UCarey Gillam
Abameli abamele izinhlangothi eziphikisanayo ngokuzayo Isilingo somdlavuza weMonsanto Roundup ngenxa yokuvulwa kwangoLwesihlanu eSt.Louis baqoqane enkantolo ngoLwesine phakathi kokuqagela ukuthi izingxoxo zokuxazululwa phakathi kwabameli babamangali nomnikazi weMonsanto uBayer AG bezisesimeni esibucayi.
Lapho abameli bengekho, ukudideka ngokufinyelela kwabezindaba ezinkambisweni zokuqulwa kwamacala kwaqubuka enkantolo eyabizwa ngokuxhamazela eNkantolo Yesifunda YaseSt.Louis ngemuva kokuthi umabhalane weJaji u-Elizabeth Hogan azise ngephutha abezindaba ukuthi uma behlela ukubheka ukuqulwa kwecala bukhoma okuphakelayo okuvela kwi-Courtroom View Network (i-CVN) bazodinga imvume yomuntu ngamunye evela enkantolo. Izintatheli zatshelwa ukuthi kumele zifake isicelo sokulalelwa kwenkantolo sokuthi ngabe zingakubuka yini noma cha ukudla kwenkantolo okuvumile ukuvumela iCVN ukuthi ikunikeze.
I-CVN ibe seyithumela izintatheli isaziso ibazisa ngeqiniso lokuthi bangavinjelwa ukuthi babukele nje ukude lapho kuqhubeka khona lenqubo: “Sazisiwe ukuthi iNkantolo ibukeka ibeke isidingo sokuthi noma yiliphi ilungu labezindaba elifisa ukubukela i-Roundup video feed nge-CVN kumele ithole imvume ethile enkantolo yokwenza lokho. Ummeli wethu uzama ukuxhumana nejaji i-ASAP ukuxazulula lokhu, futhi ngethemba lokuthi lizoxazululwa, ”kusho i-imeyili ethunyelwe izintatheli nge-CVN.
Ngokwengeziwe, ukulalelwa bekuzothatha udaba lokuthi iCVN ingahlinzeka ngokufinyelela echibini eziteshini ezithile zezindaba zokusakaza. Iziteshi zomsakazo nezethelevishini ezifuna ukuhlanganyela ezinye zezilaleli nokulalelwa kwazo kuzodinga ukuthi zinxuse ijaji.
Ukulalelwa kwesinqumo kuhoxisiwe ngoba abameli bakaBayer, abamelene nokusakaza leli cala, bebengekho. Manje udaba lokufinyelela echibini luzothathwa ngoLwesihlanu ekuseni ngaphambi kokuvula izitatimende ecaleni, kusho uGross.
Ukulinganiselwa kokubuka nje icala elamenyezelwa ngumabhalane wejaji kuvele ukuthi bekunganembile, ngokusho kokhulumela inkantolo uThom Gross. Kunemikhawulo ebukhali kulabo abazobe bebukele, noma kunjalo. Akukho “ukulanda, ukurekhoda, ukusakaza kabusha noma ukuthumela kabusha noma yikuphi okuqukethwe, kufaka phakathi ama-screen shots” avunyelwe.
Inkulumompikiswano yokuthi leli cala lingabonakala kangakanani ibilokhu iyikhathaza iBayer njengoba ifuna ukuxazulula amashumi ezinkulungwane zamacala afakwe ophikweni lwayo iMonsanto oluthi iRoundup namanye ama-herbicides asuselwa eglyphosate abangela i-non-Hodgkin lymphoma. Abamangali baphinde basola ukuthi iMonsanto bekufanele ixwayise abasebenzisi kodwa kunalokho yahlanganisa ubungozi bemithi yayo yokubulala ukhula.
Ubufakazi ezilingweni ezintathu eziphothulwe kuze kube yimanje buqubule intukuthelo yomhlaba mayelana nokuziphatha kwenkampani iMonsanto, njengoba abameli babamangali bethule amarekhodi angaphakathi eMonsanto lapho abaphathi bezinkampani bexoxa ngezincwadi zesayensi zokubhala ghost, bethumela ngasese abantu besithathu ukudicilela phansi ososayensi abazimele, nokuzuza ebudlelwaneni obumnandi nezikhulu ze-Environmental Protection Agency.
UBayer ukusho lokho kuthelevishini icala laseSt kungafaka engozini abasebenzi bayo, kufaka phakathi ababengabaphathi beMonsanto.
Izinkampani zabammeli zabammangali ezahola leli cala ezweni lonke zivumile ukukhansela noma ukuhlehlisa ukuvivinywa okuningi, okubandakanya okubili okubandakanya izingane ezisencane ezinomdlavuza, njengengxenye yezingxoxo zokuxazulula le nkinga neBayer.
IBayer ibingakufihlanga ngesifiso sayo sokuxazulula amacala amaningi ngaphambi kokuthi kuqhubeke ezinye izivivinyo. Kodwa elinye lamacala amakhulu kakhulu abamangali aphethwe ngummeli waseVirginia uMike Miller, kanti uMiller kuze kube manje wenqabile ukuhlehlisa ukuqulwa kwamacala kwabamangali bakhe, ngokusobala enciphisa izithembiso zokukhokhelwa. Inkampani kaMiller ihlinzeka ngokululeka kwecala laseSt. Louis nelinye eCalifornia elisaqhubeka nokukhethwa kwamajaji.
Inkampani yaseMiller inezilingo eziningi ezizayo zabamangali bayo.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, EPA, Ukudla, glyphosate, Monsanto, RoundUp, isayensi, St. Louis, Isivivinyo
Izibalo ziphakeme ngezilingo ezimbili zomdlavuza weRoundup eziqala phakathi kwezingxoxo zokuhlala
Posted on January 22, 2020 by UCarey Gillam
Sekuyiminyaka ecishe ibe mihlanu selokhu ososayensi bomdlavuza bamazwe omhlaba bahlukanisa ikhemikhali elidumile lokubulala ukhula njenge-carcinogenic, izindaba ezidale ukuqhuma kwamacala alethwe yiziguli ezinomdlavuza ezisola lowo owayekade eyikhemikhali uMonsanto Co. ngokuhlupheka kwabo.
Abamangali abangamashumi ezinkulungwane base-US - abanye abameli ababandakanyeka enkantolo bathi ngaphezu kuka-100,000 - bathi umuthi wokubulala ukhula kaMonsanto's Roundup nabanye ababulali bokhula abasuselwa e-glyphosate kubenze baba ne-non-Hodgkin lymphoma, kanti uMonsanto uchithe iminyaka efihla izingozi kubathengi.
Izilingo ezimbili ezintsha - esisodwa eCalifornia nesinye eMissouri - manje sisezinhlelweni zokukhetha amajaji. Izitatimende zokuvula zihlelelwe uLwesihlanu ukuthi kuqulwe icala laseMissouri, eliqhubeka eSt. Ijaji kulelo cala livumela ubufakazi ukuthi bukhonjiswe kuthelevishini futhi busakazwe ngu Inethiwekhi Yokubuka Inkantolo.
Bayer ubelokhu enesifiso esikhulu sokugwema ukubonwa kwezilingo eziningi futhi aqede isaga esenze ukuthi imali yezimakethe ezinkulu zenze imali, futhi ivezwe emhlabeni Ibhuku lokudlala langaphakathi leMonsanto lokukhohlisa isayensi, abezindaba kanye nabalawuli.
Kubukeka sengathi leso siphetho singafika kungekudala.
"Lo mzamo wokuthola ukuxazululwa okuphelele kwamacala eRoundup unomfutho," kusho umlamuleli uKen Feinberg enkulumweni abe nayo. Uthe "unethemba ngokuqapha" ukuthi ukuxazululwa "kukazwelonke" kwamacala aseMelika kungenzeka phakathi nesonto noma amabili ezayo. UFeinberg waqokwa ngoMeyi odlule yiJaji Lesifunda sase-US uVince Chhabria ukwenza lula inqubo yokuxazulula le nkinga.
Alukho uhlangothi olufunayo ukulinda ukubona ukuthi kudluliswa kanjani ukudluliswa kwezinqumo mayelana nezinqumo zecala, ngokusho kukaFeinberg, kanti iBayer inethemba lokuthi izokuba nezindaba ezimnandi ezizobikwa kuyo umhlangano wamasheya waminyaka yonke Ngo-Ephreli.
"Uhambisa idayisi ngalezo zikhalazo," kusho uFeinberg. "Angicabangi ukuthi ukhona umuntu ofuna ukulinda kuze kube lezo zicelo zidluliswa."
Esitatimendeni sakamuva senqubekelaphambili yokuhlala, icala elihlelelwe ukuqala ngesonto elizayo eCalifornia - uCotton v. Monsanto - lihlehlisiwe. Usuku olusha lwecala selubekelwe uJulayi.
Futhi ngoLwesibili, Chhabria ukhiphe umyalelo oqinile ukukhumbuza izinhlangothi zombili ngesidingo semfihlo njengoba izingxoxo zokuxazulula zisaqhubeka.
"Ngokwesicelo somlamuleli, amaqembu ayakhunjuzwa ukuthi izingxoxo zokuxazululwa… ziyimfihlo nokuthi iNkantolo ngeke inanaze ukuphoqelela ukugcinwa kwemfihlo ngokujeziswa uma kunesidingo," kubhala uChhabria.
Izinombolo zama- $ 8 billion- $ 10 billion ziye zantanta emithonjeni yamacala, yize uFeinberg ethe ngeke "aqinisekise lelo nani." Abanye abahlaziyi bathi ngisho ne- $ 8 billion kungaba nzima ukuthethelela abatshalizimali beBayer, futhi balindele inani eliphansi kakhulu lokukhokha.
Izinkampani zabammeli zabammangali ezahola leli cala ezweni lonke zivumile ukukhansela noma ukuhlehlisa ukuvivinywa okuningi, okubandakanya okubili okubandakanya izingane ezisencane ezinomdlavuza, njengengxenye yezingxoxo zokukhokha. Kepha njengoba behlehla emuva, amanye amafemu agijimayo abelokhu egijimisa ukusayina abamangali abasha, into eyenza kube nzima izingxoxo zokuhlala ngokukhipha izinkokhelo zomuntu ngamunye.
Izingxoxo ziphinde zaba nzima ukuthi omunye wabaholi abaphambili be-Roundup - ummeli waseVirginia uMike Miller, ongumakadebona ekuthatheni izinkampani ezinkulu enkantolo - kuze kube manje wenqabile ukuhlehlisa ukuqulwa kwamacala, ngokusobala enciphisa ukunikezwa kokukhokhelwa. Inkampani kaMiller imele izinkulungwane zabamangali futhi inikeza izeluleko eziholayo kulezi zilingo ezimbili eziqhubekayo manje.
IMiller Firm ibe yingxenye ebucayi yeqembu ebiphinde ibandakanye nefemu iBaum Hedlund Aristei & Goldman yaseLos Angeles eyemba amarekhodi angaphakathi eMonsanto ngokutholwa, kusetshenziswa ubufakazi ukufeza ukunqoba kwecala ezintathu Lawo marekhodi abhebhezela impikiswano yomhlaba wonke mayelana nokuphepha kwe-Roundup, ekhombisa ukuthi iMonsanto yawafaka kanjani amaphepha esayensi abonakala ngokungeyikho ukuthi adalwa kuphela ososayensi abazimele; wasebenzisa abantu besithathu ukuzama ukudicilela phansi ososayensi ababika ingozi nge-glyphosate herbicides; futhi ibambisene nezikhulu ze-Environmental Protection Agency ukuvikela isikhundla sikaMonsanto sokuthi imikhiqizo yayo ayibanga umdlavuza.
Amanye amaklayenti kaMiller ayamjabulisa, enethemba lokuthi ngokubamba uMiller angakhokha inkokhelo enkulu yezicelo zomdlavuza. Abanye besaba ukuthi angahlasela amathuba okuthola indawo enkulu yokuhlala, ikakhulukazi uma inkampani yakhe ilahlekelwa esinye sezilingo ezintsha.
UFeinberg uthe akucaci ukuthi kungatholakala isinqumo esibanzi ngaphandle kukaMiller.
"UMike Miller ungummeli omuhle kakhulu," kusho uFeinberg. Uthe uMiller wayefuna lokho acabanga ukuthi kuyisinxephezelo esifanele.
UFeinberg uthe miningi imininingwane okumele ilungiswe, okubandakanya nokuthi imali izokwabiwa kanjani kubamangali.
Ukulandelwa komhlaba wonke kwezintatheli, abathengi, ososayensi kanye nabatshalizimali babheke intuthuko eduze, balindele umphumela ongaba nomthelela wokunyakaza emazweni amaningi ukuvimbela noma ukuvimbela imikhiqizo ye-glyphosate herbicide.
Kepha labo abathinteke kakhulu yizisulu ezingenakubalwa zomdlavuza kanye namalungu emindeni yabo abakholelwa ukuthi ukubeka phambili phambili kwezinkampani kwenzuzo ngaphezu kwezempilo yomphakathi kumele kubhekelwe kubo.
Yize abanye abamangali belaphe ngempumelelo umdlavuza wabo, abanye bafe besalinde ukuxazululwa, kanti abanye bagula kakhulu njengoba usuku ngalunye ludlula.
Imali yokuhlala ayilaphi muntu noma ibuyise umuntu omthandayo osephasile. Kepha kungasiza abanye ukukhokha izikweletu zokwelashwa, noma ukumboza izindleko zasekolishi zezingane ezilahlekelwe umzali, noma kuvumele nje impilo elula phakathi kobuhlungu obulethwa umdlavuza.
Kungaba ngcono kakhulu uma besingadingi ukumangalelwa ngobuningi, amaqembu abameli neminyaka enkantolo ukufuna izinkokhelo zokulimala okubangelwa yimikhiqizo eyimakethe eyingozi noma ekhohlisayo. Kungaba ngcono kakhulu ukuba nohlelo lokulawula oluqinile oluvikela impilo yomphakathi nemithetho ejezisa ukukhohliswa kwezinkampani.
Kungaba ngcono kakhulu ukube besihlala ezweni lapho ubulungiswa bebutholakala kalula khona. Kuze kube yileso sikhathi, siyabuka futhi silinde futhi sifunde emacaleni afana necala le-Roundup. Futhi sithemba okungcono.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker UBaum Hedlund, Bayer, EPA, Ukudla, glyphosate, Missouri, Monsanto, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, St. Louis, izilingo
IMonsanto ilahlekelwa ngumzamo wokuqeda ukuqulwa kwecala laseSt.Louis eliqala ngesonto elizayo
Posted on January 16, 2020 by UCarey Gillam
Umnikazi waseMonsanto waseGerman uBayer AG wehlulekile emizameni yokuqeda ukuqulwa kwecala laseMissouri mayelana nezimangalo ezalethwa yiziguli ezinomdlavuza zokuthi i-herbicide kaMonsanto ibangele izifo zabo kanti iMonsanto ifihle izingozi.
Esinqumweni esikhishwe ngoLwesithathu, ijaji laseSt. Louis City u-Elizabeth Byrne Hogan weSekethe lama-22 laseMissouri wabusa ukuthi inkampani ibingenalo ilungelo lokufingqa isinqumo ecaleni lika-Wade v. Monsanto, okulindeleke ukuthi liquliswe icala ngoLwesibili.
UHogan waphinde wakhungatheka uMonsanto ngoku-oda uLwesine ukuthi icala lingaqoshwa ngomsindo nevidiyo futhi lisakazwe emphakathini. Abameli bakaMonsanto babephikisana nokuthi leli cala akufanele lisakazwe ngoba ukumenyezelwa kungabeka engcupheni ofakazi nalabo ababengabaphathi beMonsanto.
IJaji uHogan likhiphe isinqumo sokuthi leli cala lizovulelwa ukuqoshwa komsindo nevidiyo futhi lisakazwe kusukela ekuqaleni kwalo ngoJan 21 kuze kube sekupheleni kokuqulwa kwecala, ngaphandle kokunikezwa okuningana, okubandakanya ukungabikhona kokukhethwa kwabasizi bejaji.
Icala lizoba elokuqala ukwenzeka eSt. Louis, okuyidolobha lakudala laseMonsanto ngaphambi kokuba inkampani ithengwe yiBayer ngoJuni 2018.
IMonsanto ilahlekelwe yizilingo ezintathu zokuqala esezenzekile kuze kube manje. Kulezo zivivinyo ezintathu, inani labamangali abangu-XNUMX lithe ukutholakala kwemithi yokubulala ukhula esekwe enkampanini ye-glyphosate kubangele ukuthi ngamunye wabo athuthukise izinhlobo ze-non-Hodgkin lymphoma nokuthi iMonsanto ihlanganise ubufakazi bezingozi.
Abamele izinhlangothi zombili bebelokhu besebenza nomxazululi oqokwe yinkantolo kusukela ngoMeyi odlule ukuzama ukuxazulula inkinga. Njengoba izingxoxo zokukhokha seziqhubekile, iBayer ixoxisane ngempumelelo nezinhlangano ezithile zabammangali zokuhlehlisa kanye / noma ukukhansela ukuqulwa kwamacala amaningi, okubandakanya nelilodwa ebelizobekwa endaweni yaseSt.Louis ngesonto eledlule likaJanuwari. Phakathi kwamacala akhishwe ohlelweni lokuqulwa kwamacala kukhona amacala amabili athinta izingane eziphethwe umdlavuza kanye necala elibandakanya owesifazane othole ubunzima obukhulu ekulweni kwakhe ne-non-Hodgkin lymphoma.
Kepha ngenkathi amanye amafemu ehlehla ezinhlelweni zecala, iMiller Firm ezinze eVirginia, nokuyilungu elihola iqembu labamangali ecaleni likaWade, liye phambili. IMiller Firm isivele inokunqoba kwamacala amabili ngaphansi kwesandla sayo, njengoba imele ummangali wokuqala wecala, UDewayne “Lee” Johnson, kanye nabamangali bakamuva besivivinyo, U-Alva no-Alberta Pilliod. Okunye ukuqulwa kwecala okwenzekile kuze kube manje, ngezimangalo ezalethwa ngu-Edwin Hardeman, kuphathwe amafemu amabili ahlukene.
Ngaphezu kwecala likaWade, inkampani yakwaMiller inesinye isilingo okufanele siqale eCalifornia esizodibana necala likaWade uma zombili ziqhubeka njengoba bekuhleliwe.
Amafemu amaningana ahola phambili abandakanyeka kule nkantolo ayeka ukwamukela amaklayenti amasha ezinyangeni ezedlule, kepha abanye abameli abase-United States baqhubekile nokukhangisa, badonsa abamangali abangaba khona. Eminye imithombo ithi uhlu lwabamangali manje selingaphezu kwabantu abayi-100,000. Ngonyaka odlule iBayer yabika kubatshalizimali ukuthi uhlu lwabamangali ecaleni le-Roundup selingaphezu kuka-42,000.
In ebusa ngokumelene neMonsanto efuna ukwahlulelwa okufingqiwe, iJaji uHogan lidubule izimpikiswano ezahlukahlukene ezishiwo ngabameli benkampani, kufaka phakathi umzamo ophindaphindiwe kaMonsanto wokufuna ukuthi ngenxa yokuthi i-Environmental Protection Agency (i-EPA) iphetha ngokuthi i-glyphosate akuyona i-carcinogenic, i-federal legal preemption ikhona.
"Ummangalelwa akalibalanga nelilodwa icala lokuthi uhlelo lokulawulwa kwe-EPA luzama ukufaka izicelo zabamangalelwa," kusho iJaji uHogan esinqumweni sakhe. "Zonke izinkantolo ezethule lolu daba ziyalichitha."
Mayelana nempikiswano yenkampani yokuthi ijaji akufanele libe nelungelo lokucabanga ngokulimala kwesijeziso, ijaji lathi lokho kuzobhekwa ngemuva kokubona ubufakazi obethulwe ecaleni. Ubhale wathi: “Ummangalelwa uthi ngenxa yokuthi iRoundup ivunyelwe njalo yi-EPA kanye nezinye izinhlaka ezilawulayo, ukusebenza kwayo akukwazi ukuthathwa njengokwamabomu, okungafuneki noma njengobudedengu njengomthetho. Abamangali baphendula ngokuthi bazokwethula ubufakazi bokunganaki kukaMonsanto ukuphepha kwabanye, nokuziphatha okunyanyekayo nokubi, okubanjwe kwanele ukuletha isimangalo semonakalo yokujeziswa kumajaji kwamanye amacala azamile. Ummangalelwa akanalo ilungelo lokufingqa isinqumo ngomonakalo wokujeziswa. ”
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umdlavuza, izinkantolo, EPA, Ukudla, glyphosate, Monsanto, RoundUp, isayensi, St. Louis, Isivivinyo
Ukuhlehliswa Kwesilingo saseSt. Louis Monsanto Roundup, iBayer stock iyakhuphuka
Posted on January 8, 2020 by UCarey Gillam
Johannesburg - Isilingo somdlavuza we-Roundup obekulindeleke ukuthi siqale ngasekupheleni kwale nyanga endaweni yaseSt. Louis sikhishwe edokodo, kusho isikhulu senkantolo ngoLwesithathu.
Icala, obekuzofakwa lona wesifazane ogama lakhe linguSharlean Gordon noMenzi weRoundup, iMonsanto Co, belizoqala ngoJanuwari 27 eSt. Louis County kanti belizosakazelwa umphakathi. Ngokuqaphelekayo, abameli bakaGordon bahlela ukubeka owayeyi-CEO yeMonsanto uHugh Grant esitendeni. ILouis ibiyikhaya lekomkhulu lezinkampani laseMonsanto kuze kube yilapho inkampani ithengwa yiBayer AG yaseJalimane ngoJuni ka-2018.
Ekususeni ukuqulwa kwecala ekhalendeni, ijaji kuleli cala liyalele ukuthi kubanjelwe inkomfa yesimo inyanga yonke kusukela manje, kusho okhulumela iNkantolo yaseSt. Louis County Christine Bertelson.
Icala likaGordon selivele lahlehliswa kanye - ekuqaleni belihlelelwe u-Agasti. Kokunye kokulingwa okuye kwahlehliswa ezinyangeni ezimbalwa ezedlule njengoba iBayer izama ukuthola ukuxazululwa kwenqwaba yezimangalo ezifakwe eMonsanto ngabantu abahlaselwe yi-non-Hodgkin lymphoma abathi ibangelwe ukuvezwa kweMonsanto Roundup kanye nenye i-glyphosate -kubulala ukhula. Izikhulu zeBayer zithe iMonsanto ibhekene nabamangali abangaphezu kwama-42,700 e-United States.
UGordon wakha i-non-Hodgkin lymphoma ngemuva kokusebenzisa i-Roundup herbicides iminyaka engu-25 lapho ehlala khona eSouth Pekin, e-Illinois, futhi usehlupheke kakhulu ngenxa yesifo sakhe. Ubaba omncane kaGordon, naye obesebenzisa uRoundup ekhaya lomndeni, ubulawe ngumdlavuza. Icala empeleni lisuselwa ecaleni elikhulu elifakwe ngoJulayi 2017 egameni labamangali abangaphezu kwama-75. UGordon wayezoba ngowokuqala walelo qembu ukuya ecaleni.
IMonsanto neBayer bayakuphika ukuthi ukubulala ukhula kweMonsanto kungadala umdlavuza, futhi bathi ukuqulwa kwamacala akunacala kepha kubhebhezelwa abameli babamangali abahahayo.
Ngokusho kwemithombo esondelene necala, izingxoxo ziyaqhubeka ukuhlehlisa ezinye izilingo zomdlavuza weRoundup, mhlawumbe kufaka phakathi isethi eyodwa ezoqala ngoJanuwari 21 eNkantolo yaseSt. Abameli beMonsanto kanye nabamangali ezilingweni ezizayo zikaJanuwari benqabile ukuphawula.
Izabelo eBayer zishaye ngesonto eliphezulu ngamaviki angama-52 futhi bezicishe zibe ngamaphesenti amathathu ngoLwesithathu. Abatshalizimali bebelokhu befuna inkampani ukuthi ithole indlela yokugwema ukuqulwa kwamacala ngokuzayo nokuxazulula amacala.
Ezivivinyweni ezintathu zomdlavuza zeRoundup ezigcinwe kuze kube manje, amajaji angavumelani athola ukuthi ukutholakala kwemithi yokubulala ukhula kaMonsanto kubanga i-non-Hodgkin lymphoma nokuthi inkampani yahlanganisa izingozi futhi yehluleka ukuxwayisa abathengi. Amajaji amathathu anikeze inani labamangali abangaphezu kwamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezimbili, kepha abahluleli ecaleni ngalinye kunciphise imiklomelo kakhulu.
Akukho monakalo osakhokhiwe njengoba iMonsanto idlulisa izinqumo.
Umhlangano waminyaka yonke wabaninimasheya waseBayer uhlelelwe umhlaka-28 Ephreli futhi abahlaziyi bathe abatshalizimali bangathanda ukubona ukuthi kuzophela nini icala ngalesi sikhathi, noma okungenani kube nenqubekela phambili ebonakalayo ekuqukethe isikweletu. Bayer isitokwe satshuza, kulahlekelwa izigidigidi zamaRandi ngenani, ngemuva kwesinqumo sokuqala samajaji ngo-Agasti 2018, futhi amanani ezabelo ahlala ecindezelekile.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umdlavuza, EPA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, Monsanto, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, St. Louis, Isivivinyo
Izilingo eziningi zomdlavuza we-Monsanto Roundup Kulindeleke ukuthi zihlehliswe
Posted on January 7, 2020 by UCarey Gillam
(BUYEKEZA uJanuwari 8, 2020- NgoLwesithathu, okhulumela iNkantolo yaseSt. Louis County, uChristine Bertelson ukuqinisekisile ukuthi icala elilodwa elizoqala ukuqulwa ngoJanuwari 27 lihlehliswe ngokusemthethweni lingakabekwa usuku olusha lokuqulwa kwecala. Leli cala laliwukufaka owesifazane ogama lakhe linguSharlean Gordon kuMonsanto. )
Izingxoxo ziyaqhubeka zokuhlehlisa isilingo somdlavuza seRoundup esisodwa noma ngaphezulu obekulindelwe ukuthi siqale ngoJanuwari, kufaka phakathi izivivinyo ezihlelelwe iSt.
Amadokodo ezinkantolo asakhombisa ukuhlolwa ihlelelwe kamuva kule nyanga eLouis nasezinkantolo zaseCalifornia, futhi izikhulu zenkantolo zithi zisahlela ukuthi kuqulwe ukuqulwa kwamacala ngezinsuku ezibekiwe. Kepha imithombo eminingi yezomthetho ithe izinhlangothi eziphikisanayo beziseduze nezivumelwano ezizosusa ukuqulwa kwamacala ezinyangeni ezimbalwa, uma kungenjalo. Abameli beMonsanto kanye nabamangali ezilingweni ezizayo zikaJanuwari benqabile ukuphawula.
Inkulumo yokulibaziseka kwecala ayilindelekile. IBayer AG, inkampani yaseJalimane eyathenga iMonsanto ngoJuni 2018, yaxoxisana ngempumelelo ne ukuhlehliswa kwamacala amaningi lokho bekuhlelelwe ukuwa kwe-2019 ngemuva kokulahlekelwa yilolo nalunye lwezilingo ezintathu ezibanjiwe kuze kube manje. Ngamunye wabamangali ababandakanyekayo abathi babenomdlavuza wabo babangelwa ukuchayeka ku-Roundup nakwamanye ama-herbicides asekelwe eMonsanto glyphosate.
Amajaji ithole hhayi nje ukuthi imithi yokubulala ukhula yenkampani ingadala umdlavuza, kepha nokuthi iMonsanto ibazi ngezingozi futhi ifihle imininingwane kubathengi. IBayer ilinganise ukuthi bangaphezu kuka-42,700 abantu abafake izicelo eMelika bephikisana neMonsanto, manje osekuyiyunithi ephethwe yiBayer ngokuphelele.
IBayer kanye nethimba labammeli babamangali bebelokhu bephokophele ukuxazululwa kwenkantolo okungaba ngaphezu kwamadola ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisishiyagalombili, kusho imithombo yezomthetho.
IBayer ibikhathazeke kakhulu ngezilingo ezihlelelwe iSt. Louis, lapho owayenguMphathi Omkhulu weMonsanto uHugh Grant ubizelwe enkantolo ukuthi anikeze ubufakazi kanti ukuqulwa kwecala lommangali uSharlean Gordon kumele kusakazwe emphakathini. Ezivivinyweni ezintathu ezedlule, zonke ezazibanjelwe eCalifornia, abaphathi beMonsanto banikeze ubufakazi ngokufakwa kwemali futhi akudingeki ukuthi bame phambi kwamajaji.
"Ukuhlehliswa kwesilingo kunengqondo manje," kusho umhlaziyi weSusquehanna Financial Group uTom Claps. "Ngikholelwa ekutheni kungakuhle kakhulu ukuthi wonke umuntu angaphumi enkantolo ngalesi sikhathi, ikakhulukazi uma izingxoxo zibonakala ziqhubeka kahle."
Phakathi kokuhamba, amacala amaningi aqhubeka nokuqina. Abameli bakaMonsanto bebesenkantolo ngoMsombuluko e-Independence, eMissouri ukusetha usuku nesikhathi sokuqulwa kwecala elisanda kufakwa enkantolo elethwe ngowesifazane onenkinga ye-non-Hodgkin lymphoma athi wayithuthukisa ngenxa yokuhlala kwakhe eRoundup.
UGregory Chernack waseWashington, DC, osenkampanini yabameli baseHollingsworth, enye yamafemu ezokuvikela aseMonsanto, utshele ijaji e-Independence ukuthi iMonsanto ifuna leli cala lihlanganiswe nabanye abangaba ngu-30 ababhekwe yijaji elihlukile eKansas City, eMo. Abameli bakammangali uSheila Carver basiphikisile lesi siphakamiso, base becela ijaji ukuthi liqhubeke libeke usuku lokuqulwa kwecala. IJaji leNkantolo yesiFunda iJackson County uJennifer Phillips uthathe isinqumo sokunika amaqembu izinsuku ezingama-30 ukuthi afake iziphakamiso ngalolu daba.
“Isitoko seBayer asisamukelanga kahle isinqumo ngasinye kulawa mathathu. Ngakho-ke, iBayer ayifuni ukubhekana nezihloko zezilingo ezingezinhle ngokulahlekelwa elinye icala, ikakhulukazi ngenkathi isezingxoxweni zokuxazulula izinkinga, ”kusho uClaps.
Kunezici eziningi ezisetshenziswayo, noma kunjalo, kufaka phakathi ukungaqiniseki okuzungeze umphumela wezikhalazo okulindwe ukulingwa ngakunye kokuthathu. Uma inkantolo yokudluliswa kwamacala ibingaguqula okutholwe yijaji mayelana nesibopho sikaMonsanto, bekunganciphisa amandla okuxoxisana kwabamangali ukuze kuxazululwe umhlaba wonke. Ngakolunye uhlangothi, isikhundla senkampani sizobuthakathaka uma izinqumo zamajaji zigcinwa lapho kudluliswa icala. Kepha asikho isinqumo esilindelekile ekudlulisweni kwamacala izinyanga ezimbalwa ngaphezulu okungenani.
NgoDisemba, uMnyango Wezobulungiswa waseMelika uthathe isinyathelo esingajwayelekile se- ukulamula enkantolo kuya eceleni kweMonsanto kanye neBayer ekudlulisweni kwesinqumo esisodwa.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umdlavuza, izinkantolo, EPA, glyphosate, zezempilo, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, St. Louis
Owayengumphathi we-Monsanto wayala ukuthi afakaze ku-Roundup Cancer Trial
Posted on December 7, 2019 by UCarey Gillam
OwayenguSihlalo noMphathi Omkhulu weMonsanto Hugh kuzofanele azethule mathupha enkantolo endaweni yaseSt. .
UGrant, owahola iMonsanto ezinze eSt. Louis kusukela ngo-2003 yaze inkampani yathengiselwa iBayer AG yaseJalimane ngoJuni ka-2018, futhi wachitha iminyaka engama-37 esebenzela iMonsanto, wabizelwa enkantolo ngabameli ummangali uSharlean Gordon, ukufakaza ecaleni elizoqala ukuqala ngoJanuwari 27 eNkantolo Yesekethe yaseSt.
Icala likaGordon ekuqaleni lalihlelelwe u-Agasti walo nyaka kodwa labambezeleka njengengxenye yomzamo wokwenza izingxoxo zokuxazulula phakathi kweBayer nabameli bezinkulungwane ezingamashumi ezinkulungwane zabamangali abamangalela iMonsanto ngezicelo ezifana nezikaGordon.
Ezinye izilingo ezimbili ezibekelwe uJanuwari, zombili ezinkantolo zaseCalifornia futhi zombili ezibandakanya izingane ezitholwe zinomdlavuza, zazikhona okusanda kuhlehliswa ngenxa yezingxoxo eziqhubekayo zokuhlala.
I-Bayer ilinganisela ukuthi njengamanje kunabamangali abangaphezu kwama-42,000 abasola ukuthi ukuvezwa kwe-Roundup kaMonsanto namanye ama-herbicides asuselwa e-glyphosate enziwe yiMonsanto kubangele bona noma abathandekayo babo ukuthi benze i-non-Hodgkin lymphoma.
UGrant bekungadingeki ukuthi afakaze bukhoma ezivivinyweni ezintathu zomdlavuza weRoundup ezenzekile kuze kube manje ngoba zonke zazibanjelwe eCalifornia. Kepha ngenxa yokuthi uGrant uhlala eSt. Louis County, abameli babamangali babona ithuba lokummisa mathupha.
Abameli bakaGrant bebelokhu belwa naleso sabizo, bethi akayena usosayensi noma uchwepheshe wezomthetho futhi usevele uhlinzeke ngemininingwane efakazela ubufakazi bokufakwa kwezikhundla. UGrant uphinde waveza ukuthi akumele afakaze ngoba uhlela ukuba aphume kuleli kusukela ngoFebhuwari 9.
Kepha esinqumweni esikhishwe ngoDisemba 5, umphathi okhethekile oqokelwe leli cala ubesondele kubameli bakaGordon wabusa ukuthi uGrant wayengenalungelo lokuthola umyalo wokuqeda isamanisi ukuze kufakwe ubufakazi.
“Mnu. UGrant uvele kwinhlolokhono emsakazweni womphakathi emele ukuthi iRoundup akuyona i-carcinogen; emikhakheni yokuthola imali kubatshalizimali uMnu Grant uphendule ngokwakhe ukuthi ukuhlukaniswa kwe-glyphosate njenge-carcinogen okungenzeka kwaba 'yisayensi engenamsoco;' ngo-2016 uMnu Grant wanxenxa mathupha uMphathi we-EPA kanye noSihlalo Wekomidi Lezolimo ngesihloko se-glyphosate, ”kusho i-master master oda.
“Yize uMnu uGrant engenalo ulwazi lwesayensi ukuthi ngokungangabazeki luzoba yingxenye ebalulekile yalolu cala, wayengu-CEO weMonsanto iminyaka engu-15 futhi wabamba iqhaza ezethulweni, ezingxoxweni, ezingxoxweni nakwezinye izinto ezazivela eMonsanto njenge-CEO lapho izihloko Kuchazwe i-Roundup ne-glyphosate, kwaxoxwa kwavikelwa, ”kusho iSpecial Master uThomas Prebil esinqumweni sakhe.
UGordon wakha i-non-Hodgkin lymphoma ngemuva kokusebenzisa i-Roundup herbicides iminyaka engu-25 lapho ehlala khona eSouth Pekin, e-Illinois, futhi usehlupheke kakhulu ngenxa yesifo sakhe. Ubaba omncane kaGordon, naye osebenzise uRoundup ekhaya lomndeni lapho uGordon ahlala khona waze waba mdala, wabulawa ngumdlavuza. Icala empeleni lisuselwe ecaleni elikhulu elifakwe ngoJulayi 2017 egameni labamangali abangaphezu kwama-75. UGordon ungowokuqala walelo qembu ukuya ecaleni.
Ezivivinyweni ezintathu ezedlule, amajaji angavumelani athola ukuthi ukutholakala kwemithi yokubulala ukhula kaMonsanto kubanga i-non-Hodgkin lymphoma nokuthi inkampani yazifihla izingozi zehluleka ukuxwayisa abathengi. Amajaji amathathu anikeze inani labamangali abangaphezu kwamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezimbili, kepha amajaji amathathu okuqulwa kwamacala kunciphise imiklomelo kakhulu esimweni ngasinye.
Bonke bayadluliselwa futhi akekho noyedwa kubamangali abaphumelele osetholile noma yimiphi imiklomelo yemali ama-jury ayiyalile.
Isikhalazo sikaJohnson sibambezelekile
Ummangali wokuqala ukunqoba elwa noMonsanto ngunogada wesikole waseCalifornia ovela eCalifornia. UDewayne “Lee” Johnson wanikezwa amaRandi ayizigidi ezingama-289 ngamajaji ngo-Agasti 2018. Ngokuhamba kwesikhathi ijaji lecala lehlisa umonakalo laya ezigidini ezingama-78 zamaRandi. UMonsanto ufake isicelo sokuguqula isinqumo sejaji futhi uJohnson wadlulisa icala efuna ukubuyisela umklomelo ophelele wama- $ 289 million.
INkantolo Yokudluliswa Kwezikhalazo Yokuqala YaseCalifornia ithe izothatha isinyathelo ngokushesha lapho ikhipha isinqumo mayelana nezikhalazo ezihlanganisiwe nabameli bazo zombili izinhlangothi ekuqaleni babenethemba lokuthi bazophuma nesinqumo ngasekupheleni kwalo nyaka. Kodwa icala libanjezelwe amasonto ambalwa njengoba zombili izinhlangothi zilinde usuku lokuphikisana ngomlomo. NgoDisemba 1, abameli bakaMonsanto bacela inkantolo ukuthi ingahleleli izimpikiswano ngomlomo ngoJanuwari noma ngoFebhuwari, njengoba kusalindwe izilingo ezintsha zeRoundup kulezo zinyanga. Abameli bakaJohnson basiphikisile leso sicelo sokuqhubeka nokubambezeleka.
NgoLwesihlanu, inkantolo ikhiphe umyalelo othi yize ivumelana noJohnson ngesidingo sokwenza lokho
“Hlela ukuphikisana ngomlomo ngokushesha ngangokunokwenzeka,” bekungenakwenzeka ukuthi izingxoxo zomlomo zibanjwe kuze kube nguMashi wango-Ephreli “uma kunikezwe inani nobude bayo yonke imibhalo ezocatshangelwa, iziphakamiso ezisalele inkantolo okufanele ikhiphe isinqumo ngazo lapho kubhekwa ukufaneleka isikhalo, ”nezinye izinto.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umdlavuza, EPA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, St. Louis, Isivivinyo
Izilingo eziyisithupha zeMonsanto Roundup Cancer Zibekelwe uJanuwari
Posted on November 26, 2019 by UCarey Gillam
Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa zisematheni, abameli bezinhlangothi zombili zamacala omdlavuza weRoundup ezweni lonke balungiselela izilingo ezigqagqene onyakeni omusha njengoba ezinye iziguli ezinomdlavuza eziningi zifuna ukusola iMonsanto ngezifo zazo.
Izilingo eziyisithupha njengamanje okumelwe kwenzeke ukuqala ngoJanuwari, elilodwa ngoFebhuwari, amabili ngoMashi nezilingo ezengeziwe zihlelelwe cishe njalo ngenyanga kusukela ngo-Ephreli kuya ku-Okthoba 2021. Izinkulungwane zabamangali abengeziwe basasebenza ukuthola izinsuku zokuqulwa kwamacala abo.
Abamangali ezivivinyweni ezizayo zikaJanuwari bafaka izingane ezimbili abashaywe yi-non-Hodgkin lymphoma okusolakala ukuthi ngemuva kokuvezwa kaningi emithini yokubulala ukhula iMonsanto besebancane kakhulu. Okunye okuzobanjelwa uJanuwari ukuqulwa kwecala lowesifazane ogama lakhe USharlean Gordon oseke wahlaselwa umdlavuza wakhe izikhathi eziningana. Elinye icala lizokwethula izimangalo zabamangali abahlanu abathi ukubulala ukhula kukaMonsanto kubangele umdlavuza wabo.
Ngokuphawulekile, izivivinyo ezimbili ngoJanuwari zizokwenzeka endaweni yaseSt. Louis, eMissouri - lapho iMonsanto yayinendlunkulu amashumi eminyaka ngaphambi kokutholwa kwayo ngoJuni 2018 yiBayer AG yaseJalimane. Lezo zivivinyo ezimbili zizoba ezokuqala ukuya ngaphambi kwamajaji edolobheni lasekhaya laseMonsanto. Icala likaGordon kwakumele liqale ukuqulwa kwamacala kuleya ndawo ngo-Agasti odlule kodwa lahlehliswa, njengoba nabanye babebekelwe isigamu sesibili sonyaka wezi-2019, njengoba abameli bakaBayer nabamangali beqala izingxoxo zokuxazulula le nkinga.
Kusengenzeka ukuthi uhlobo oluthile lokuxazulula - oluqondene necala ngalinye, noma olukhulu - lungenzeka ngaphambi kukaJanuwari, kepha abameli ezinhlangothini zombili balungiselela uhlelo olunikeza izinselelo eziningi zokuhleleka. Isivivinyo ngasinye kulindeleke ukuthi sithathe amasonto ambalwa, hhayi nje kuphela ukuthi abanye abameli bayabandakanyeka emacaleni okuzama ngamashejuli okulingwa agqagqene, kepha iqembu elincane lofakazi abangochwepheshe abazobe befakaza emacaleni amaningi enzeka ngasikhathi sinye.
Izilingo ezintathu zenzekile kuze kube manje enkantolo yamacala amakhulu, aqala ngo-2015 ngemuva kokuthi i-International Agency for Research on Cancer (IARC) ihlukanise ikhemikhali elibizwa ngokuthi i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu engahle ibe nenhlangano ethile ne-non-Hodgkin lymphoma. Kusukela ngama-1970s, i-glyphosate ibilokhu iyisithako esisebenzayo eMonsanto esibizwa ngama-herbicides, futhi njengamanje sithathwa njengesiyeza esibulala ukhula esisetshenziswa kakhulu emhlabeni.
Abameli babamangali bathi ukuqoqwa kwamacala njengamanje kumelela izimangalo ezinamandla kakhulu zomonakalo kunezilingo ezintathu ezedlule. "Lawa amacala aqinile," kusho ummeli u-Aimee Wagstaff, omele uGordon. NgoMashi, iklayenti lakwaWagstaff u-Edwin Hardeman uwine i- Isinqumo samajaji ayi- $ 80 million ovela kwijaji laseSan Francisco ecaleni lakhe elibhekene neMonsanto.
Ngecala likaGordon, uWagstaff usebize lowo owayenguSihlalo weMonsanto uHugh Grant ukuthi azofakaza bukhoma ecaleni. UGrant kuze kube manje ufakaze ngokudiphozitha kuphela futhi bekungadingeki ukuthi afakaze phambi kwejaji; futhi abanabo abanye abaphathi abasezingeni eliphezulu beMonsanto ngoba izilingo zabanjwa eCalifornia. Kepha ngokuqulwa kwecala eSt. Louis, abameli babamangali banethemba lokuthola ososayensi nabaphathi beMonsanto endaweni yokumangalelwa imibuzo. Abameli bakaGrant bakuphikisile ukumenza avele mathupha, kanti izinhlangothi zombili zilinde isinqumo ngalolo daba.
Esivivinyweni sakamuva kakhulu esizokwenzeka, ijaji e-Oakland, eCalifornia iyalile iMonsanto ukukhokha ngaphezu kuka- $ 2 billion kumonakalo ku-Alberta no-Alva Pilliod, umbhangqwana oshadile bobabili abahlupheka yi-NHL abasola ngokuvezwa yiRoundup. Icala lokuqala laphela ngo-Agasti 2018 lapho amajaji enkantolo yezwe eSan Francisco eyala iMonsanto ukukhokha u- $ 289 million ekulimaleni komgcini wezinkundla zesikole uDewayne “Lee” Johnson, otholakale enohlobo lokufa lwe-non-Hodgkin lymphoma. Amajaji kuwo womathathu lawa macala anqume ukuthi imiklomelo ibiningi futhi yehlisa inani lomonakalo, yize izinqumo okwamanje zidlulisiwe.
Abantu abangaphezu kwe-42,000 e-United States manje sebemangalele uMonsanto bethi i-Roundup namanye ama-herbicides eMonsanto abangela i-non-Hodgkin lymphoma. Amacala asolwa ngokuthi inkampani ibizazi kahle izingozi iminyaka eminingi kodwa ayenzanga lutho ukuxwayisa abathengi, isebenza esikhundleni sokukhohlisa irekhodi lesayensi ukuvikela ukuthengiswa kwezinkampani.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker, Ukukhangisa U-Aimee Wagstaff, Bayer, California, umdlavuza, izinkantolo, imvelo, EPA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, Missouri, Monsanto, izibulala-zinambuzane, RoundUp, St. Louis, Isivivinyo